China Horizontal Hollow Glass Clean Machine BX1600 orinasa sy mpamatsy | Nisen
1. Ny sehatry ny fanasan-damba sy ny rafitra mikoriana ny rano dia mitazona fitaovana tsy voaporofo sy lo, izay afaka zakaina amin'ny fampiasana azy.
2. Ny sehatra afovoany dia mizara ho efitrano fanasana, efitrano mandrehitra rano ary efitrano maina. Misy vokany tsara amin'ny fanasan-damba sy fanamainana.
3. Ny vanim-potoana maina ny fandraisana rano amin'ny sponjy stick, ny fanamainana ny hafanana, ny fanamainana dia tsara indrindra.
4. Ny tombony amin'ny rafitry ny fifindrana dia mandray hafainganam-pandeha dimy, mahatsapa ny tombony amin'ny fampiharana avo lenta.
Volta fampidirana 380V / 50Hz (Raha ilaina)
Hery fampidirana 7Kw
Hafainganana amin'ny asa 1.2 ~ 5.0m / min
Max. Haben'ny fitaratra 1600 * 2000mm
Min. Haben'ny fitaratra 400 * 400mm
Ny hatevin'ny vera 3 ~ 12mm
Refy ankapobeny 2500 * 2030 * 1000mm
Sary antsipirian'ny masinina
1. Masinina fanadiovana vera mihantona
2. Latabatra fivoriambe Rubber Strip
4. Masinina Hollow Glass Press Press
3. Latabatra misy lakaoly
1. Karazana fonosana: sarimihetsika mihinjitra rehefa raharaha FCL na trondro rehefa LCL.
2. Seranan-tsambo: seranan-tsambo Qingdao na seranana voatondro hafa.
3. Fotoana mitarika:
1. L / C: (1) fametrahana 30% amin'ny T / T, fifandanjana 70% amin'ny L / C. (2) 100% L / C.
2. T / T: fametrahana 30% amin'ny T / T, fifandanjana 70% alohan'ny fandefasana an'i T / T.
3. Fomba fandoavam-bola hafa: Western Union.
1. Fanohanana ara-teknika mandritra ny 24 ora amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka, WhatsApp, WeChat, skype sns (safidio ny fomba mety indrindra aminao)
2. Ny injeniera miteny anglisy dia azo alaina ao amin'ny orinasa misy anao amin'ny fametrahana, fikojakojana ary fanofanana.
3. Mampiasà rindrambaiko anglisy sariaka, boky torolàlana ho an'ny mpampiasa ary horonan-tsary amin'ny antsipiriany.
4. Warranty mandritra ny herintaona, afa-tsy ireo ampahany azo ampiasaina.
Amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo fanampiana ireo, dia alainay antoka fa hanomboka tsara ny orinasa ny mpanjifa, hahatsapa ny fiaraha-miasa mandresy fandresena.
1. Valio haingana ao anatin'ny 12 ora.
2. Serivisy iray na iray.
3. 24 ora ho an'ny serivisy aorian'ny fivarotana.
4. Maherin'ny 15 taona ny traikefa amin'ny famokarana sy fanondranana.
5. Handefa sary sy horonan-tsary ho an'ny mpanjifa izahay mandritra ny famokarana. Avy eo izahay dia handamina ny fandefasana rehefa afa-po amin'ny vokatray ianao.
Ahoana ny fomba hanafarana ny vokatray
Lazao anay ny vokatra ilainao
Lazao anay ny zavatra takinao (habe sns)
Mifampiresaka momba ny antsipiriany
Manafatra ary manaova vola
Agents sy sampana any ivelany
Azafady mifandraisa aminay ary hamafiso raha misy maso sy sampana ao amin'ny faritra misy anao. Ary miarahaba anao koa izahay ho tonga masoivohonao raha liana ny hanampy andalana vokatra ianao ary te hizara milina ho an'ny mpanjifanao. Hiezaka mafy izahay hanohana anao.
1. Ahoana ny amin'ny fomba fanangonana?
Matetika izahay dia manana ny vokatra feno sarimihetsika plastika ho an'ny fitoeram-bokatra feno sy boaty hazo ho an'ny ambany fitoeran-javatra iray.
Azontsika atao koa ny manamboatra ny fonosana mifanaraka amin'ny filanao.
2. Ahoana ny amin'ny fotoana fandoavana sy fandefasana?
Matetika ny teny fandoavam-bola dia TT, 30% mialoha ary 70% alohan'ny fandefasana. Azontsika atao koa ny manaiky raha manana fepetra hafa ianao.
Raha ny mahazatra, ny vokatra dia azo entina ao anatin'ny 15 andro aorian'ny fandoavanao.
3. Inona ny habetsaky ny kaomandinao farany?
Masinina iray ihany no mety amin'ny baiko.
4. Azonao atao ve ny manao ny famokarana toy ny namboarina?
Eny, afaka mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takinao izahay.
Teo aloha: Volom-pamokarana fitaratra fitaratra mandeha ho azy LB2200W
Manaraka: Masinina fanapahana mombamomba ny konektor aluminium